Kusanganisira Instagram Mifananidzo Yakawedzera Email Engagement 7x | Martech Zone
Muvhuro, October 19, 2015 Mugovera, Kukadzi 4, 2017 Douglas Karr
In Iyo Nyika Yekutarisa Commerce, chidzidzo chakaitiswa na Curalate uye Internet Kushambadzira Association, vangori 8% yevatengesi vaitenda zvine mutsindo kuti vari kunyatso kushandisa mifananidzo kutyaira email kubatanidzwa.
76% emaemail anosanganisira enhau enhau asi 14% chete emaemail anosanganisira mifananidzo yemagariro.
Chivimbiso chepakutanga chezvemagariro enhau kwaive kugona kwemakambani kugadzira hukama hunogoneka nevatengi vavo. Izvi zvinoita kuti makambani ave anotaurika uye akavimbika. Sanganisa icho icho pamwe nekuputika kukura kwemifananidzo munzanga midhiya, uye hazvishamise kuti kusanganisa magariro enhau nemifananidzo zvine simba. Wedzera izvi kusundira mameseji kune ako vatengi, uye iwe unogona kungova pane chimwe chinhu!
Paunotarisa mhando dzakatanga kushandisa Instagram mifananidzo mukati meemail, mabhenefiti akajeka. Mumwe mutengesi wemuviri, semuenzaniso, akaendesa 7X kusimudza mukubatana nemifananidzo yezvigadzirwa pawebhusaiti yavo maawa makumi maviri nemana chete mushure mekutumira yavo yekutanga Instagram-yakapinza email.
Curalate uye Inofambisa Ink yakagadzira inotevera infographic, Instagram + Email: Razvino Zuva Romance.
Tags: curalateemail uye zvemagariroemail uye vezvenhauInstagraminstagram infographicinternet kushambadzira mubatanidzwaingi inotakurikazvemagariro uye emailpasocial media uye emailzvekutengesa zvekuona